Tag: mgbasa ozi ahịa mkpanaka | Martech Zone
Tag: mgbasa ozi ahịa mkpanaka
Mobile Marketing na-alọghachi na Vogue – Olee otú Brands nwere ike akpaaka na ọnụ ọgụgụ-elu ha Mobile Mgbasa Ozi?
Tuesday, January 11, 2022 Tuesday, January 11, 2022 Dimitris Mania
Onye ọ bụla na-anabata ngwaọrụ mkpanaka ebe niile. N'ọtụtụ ahịa taa - ọkachasị na mba ndị na-emepe emepe - ọ bụghị naanị ihe gbasara ekwentị na mbụ mana naanị ekwentị. Maka ndị na-ere ahịa, ọrịa na-efe efe kwalitere ịkwaga na dijitalụ n'otu oge ahụ ka a na-ewepụ ikike ịchụ ndị ọrụ site na kuki ndị ọzọ. Nke a pụtara na ọwa ekwentị mkpanaaka dị ugbu a dị mkpa karịa, n'agbanyeghị na ọtụtụ ụdị ka na-ejikọta ọnụ n'otu ntabi anya na enweghị atụ.